Ogaden News Agency (ONA) – Dagaal Kadhacay Garigo’an oo Ciidanka Gumaysiga Khasaare Loogu Gaystay.
Dagaal Kadhacay Garigo’an oo Ciidanka Gumaysiga Khasaare Loogu Gaystay.
Posted by Dulmane	/ July 6, 2016
Wararka Wakaalada Wararka Ogadenya ee ONA kasoo gaadhaya Gobolka Nogob ee wadanka Ogadenia ayaa faah
faahin ka bixinaya Dagaal Jimcihii lasoo dhaafay ooy taariikhdu ku beegnayd 01/7/2016 kadhacay Tuulada Garigo’an ee Gobolka Nogob.
Warkan oo uu noosoo diray Wariyaha ONA uga soo warama Xarunta Dhexe ee Jabhada Wadaniga xoraynta Ogadenia (JWXO) ayaa tibaaxaya in ciidanka gumaysiga Itoobiya halkaas loogu gaystay khasaare lixaad leh.
Sida warku sheegayo saraakiisha Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenya (CWXO) ee aagaas ku sugan ayaa ku guulaystay weerar qorshaysan oo lala beegsaday fadhiisin ay ciidanka gumaysigu ku lahaayeen duleedka Tuulada
Garigo’an oo kamid ah goobaha ugu badan ee khasaaraha loogu gaysto ciidamada cadawga ah ee xooga kujooga dhulka Ogadenia.
Sida warkan lagu xaqiijiyay dagaalka oo dhacay habeenimadii Jimcaha ahayd ee 1/7/16 ayaa saldhiga ciidanka gumaysiga lugu garaacay qoryaha waawayn ee garabka laga rido kadibna ciidanka JWXO ayaa gudaha ugalay
xerada ciidanka cadawga waxaana lagu soo waramayaa in cadawga goobta lagaga dilay 10 askari halka 15 kalana lagaga dhaawacay.
Sikastaba ha ahaatee ciidankii gumaysiga lagaga dhaawacay ayaa lagusoo waramayaa in ay kujiraan kuwo aad u ildaran oo aan rajo laga qabin in ay soo kabtaan.